I-Simba Rakanyanya Kuvhara Zvishandisi Zvimwe Zvichienderana NaSemalt
magwaro, mifananidzo nemamwe marudzi ehupenyu kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyanzvi dzinonyora zvirongwa zvakadaro dzinofanira kutarisana nevakawanda vatengi kubva kumativi ose epasi, ndicho chikonzero ivo vakagadzira zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana-siyana zvekutsvaga zvinyorwa kuti vawane zvakanakisisa kubva pakutsvaga deta. Kunyange mamwe emakambani makuru uye akakurumbira enyika akavimbisa zvidzidzo zvekuongorora zvinyorwa kuti abvise ruzivo rwakakosha kubva mumambure. Chinhu chakanakisisa ndechekuti mapurogiramu aya anogona kushandiswa pazuva rega, vhiki nevhiki, kana mwedzi wega wega pasina dambudziko - debt relief companies nj. Uchishandisa zvimwe zvemba-screen scraping mapurogiramu kana zvishandiso, unogona kuwana dhenda kubva kune mawebsite akasiyana-siyana uye kuipa kune vatengi vako mune chero maitiro. Izvi zvishandiso zvekuchera zvakange zviri mukugadzirwa kwemakore uye zvino zvinogona kutakura zvinhu zvemasayiti panguva. Kushandisa iwo, iwe unogona kushanda semapurogiramu akawanda uye kubvisa nzvimbo dzakawanda sezvaunoda. Uyezve, iwe unogona kuchengetedza data yakawanikwa mu API kana maSVV mafaira.
Screen Scraping Tools dzinogona kuchengetedza mitsipa yako nenguva
Zvimwe zvinotevera zvina zvishandiso zvekugadzira zvigadzirwa zvichachengetedza nguva yako yose nesimba rako raunowanzoshandisa pahuwandu hwemashoko:
Ndiyo imwe yakasimba uye inoyevedza purogiramu yokupima screen. Inogona kuchengetedza matani e data uye kuronga iyo kwekushandisa kushandiswa kwepaIndaneti. Iwe unogona kuisa pakarepo bookmark Kimono Browser uye unoshandura unstructured data mu CSV kana JSON mafomu.
Kukohwa kwepfungwa ndeimwe yenzira dzinonyanya kukosha dzekufambisa mashoko. Inotibatsira kuti tishandise zvakanakisisa zvemazuva ano mapurogiramu. Zvakachengeteka kutaura kuti pane maitiro akasiyana ekuumba nekuchengetedza dhamasiko, asi hapana chinhu chiri nani kudarika zvigadzirwa zvekuvhara zvishandisi. Chinhu chakanaka ndechekuti iyi software inoshanda nevose web browser, kusanganisira Chrome, Firefox neInternet Explorer. Inogonawo kuiswa pamwe nekombiyuta ye Flash uye Silverlight, pamwe chete nemashandisirwo emabhizimisi ako akadai saSiebel, PeopleSoft, uye SAP.